"Wuxuu Igu Yidhi 'Waan Kuu Digayaaye, Mustafe Wuu Ku Xidhi Ama Wuu Ku Dili" - Wasiirkii Hore Ee Warfaafinta DDS, Xabiib Xaaji - Jigjiga Online
HomeSomalida“Wuxuu Igu Yidhi ‘Waan Kuu Digayaaye, Mustafe Wuu Ku Xidhi Ama Wuu Ku Dili” – Wasiirkii Hore Ee Warfaafinta DDS, Xabiib Xaaji
Jigjiga (JO) – Wasiirkii hore ee Warfaafinta Dawladda Deegaanka Soomaalida, Xabiib Xaaji Muxumed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka ka dhacay Deegaanka iyo tacaddiyada uu Madaxweyne Mustafe ku kacayo.
Xabiib Xaaji waxa uu sheegay in isaga oo wasiir ah ay gurigiisa soo weerareen ciidamada gaarka ah ee deegaanku oo ay gurigiisa jajabiyeen, dadkii joogayna ay jidh-dil u geysteen, iyagoo isaga raadinaya.
Wasiirka hore waxa kale oo uu tilmaamay in hanjabaado toos ah uu Madaxweyne Mustafe ugu soo dhiibay shaqsiyaad daacad u ah oo qasrigiisa dhex-jooga oo si toos ah ugu sheegay in Madaxweynuhu uu dili doono haddii uu la aragti noqon waayo.
Qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook ayaa waxa kale oo uu Xabiib Xaaji ku sheegay in soddon jeer ka badan looga yeedhay Xarunta Booliska, gurigiisana baadhitaanno lagu sameeyo, waxaanu qoraalka oo dhamaystiran u dhignaa sidan:
“Maxaa Xaqiiq ah “Xog Is Weydaarsi”
Waxaa hubaal ah in muda ahba inay Jirtay Inaanan rabin inaan ka hadlo waxyaabaha qaarkood, Anigo xeerinaya waxyaabo badan, kana fiirinaya Maslaxada dadkan Walaalaha iyo Ehelka ah, laakiin markay soo noqnoqoto in laga hadlaayi waa qasab, markaad qof caadiya tahay qofka aan caadiga ahayn waad layaabaysaa!
Bishi Jan 19, 2019, Saacadu markay ahayd 1-dii Duhurnimo, Ayaa waxaa tagay 2ba qabaal Oo Ciidan Liyu ah, Waxaana Watay Xaji-tur Guri aan maalmahaas kiraystay, waxaa Joogay Wiil watchman, Albaabkii Ganjeelka ayaa lagu jabiyay, Wiilkii Yaraana Garaac iyo aflagaado ayaa la isugu diray, kadibna ‘aaway Xabiib’ ayaa lagu yidhi, ‘ma joogo’ marku Yidhi Gurigii oo dhan ayaa lagu Jajabiyay waxayna Ku yidhahdeen ‘Usheeg inan Xabad ku dhufanayno hadii uu ka hadhi waayo Arimaha Xisbiga u wado’. Arintan waxan Usheegay ninki Amarka Bixiyay oo ahaa Madaxweyne Mustafe, Wasiiro aan Saxiibo ahayn iyo Lataliyayashiisii, Cid la waydiiyay ama laga talaabo qaadayna ma jirin.
March 8, 2019 Anigoo shirkii Capine ka soo Baxay, Nin isaga loyalty list-ka ugu Jira, aya waxuu igu yidhi Ninyahow Ninkan Mustafe ahi ama wu ku xidhi ama wuu ku dili ee arintas Ogow, waxan ku idhi ninyahow qasab ma ah waxuu rabo in aan la qaato, Lakiin concessions ama isu-tanaasul aya laguwada soon karaa, Sababtuse maxay tahay, Waxuu ii raaciyay Ninyahow anigu wan ku digay.
Bishi November 7, 2019, ama Bisha Tikimti 27, 2012, Saacaduna markay ahayd 9-ka fiidnimo, habeen khamiis, waxaa si Sharciga Garabmarsan looga qaaday Baskooladaydii oo ahayd dhabana cas, Wiilka Stafka Police-ka ii ahaa, Magaciisuna yahay Zakariyo iyo Kornayl Mukhtar oo Isla socda, waxaana ka qaaday Ciidanka gaarka ah, waa markii labaad ilaa hadana way ku maqan tahay mudo 7da Bilood ah.
Hada Gurigaygii ayaa la baadhayaa, Anigana in kabadan 30-Jeer ayaa Policeka la iiga yeedhay, Waxaan u sheegay warqad Maxkamadeed inay iila yimaadaan, mana Jirto. Waxaas oo dhana waxaa ka danbeeya Personally Mustafe Omar.
Waxaad moodaa inay tahay waa markaygii, Waxaa hubaal ah in Caqligu yahay cudud la hubo hadaan cudur kaaga dhicin, Wax aad ka hadasho iyo waxa aad isku sheegtaa waa muhiim. Mararka qaar afkaaga ayaaba kuugu daran, ee waaba loo joogi Dhag-maallow.”